Wararka - Faa'iidada Foomka Aluminium Shaqo
1. Waxtarka dhismaha sare iyo wareegga gaaban: Nidaamka qaab dhismeedka aluminium ee aluminiumku waa nidaam caarya oo si dhakhso leh loo sii daayo, kaas oo laga saari karo 18-36 saacadood, markaa kaliya hal lakab oo aluminium ah ayaa la sameeyaa iyo saddex lakab oo hal taageere ah ayaa loo baahan yahay inay la kulmaan shuruudaha. Dhismaha caadiga ah ayaa loo isticmaali karaa. Ilaa 4-5 maalmood dabaqa koowaad, sidaas darteed si weyn u gaabinaysa muddada dhismaha, kaydinta kharashyada maaraynta ee qaybta dhismaha, iyo gaabinta wareegga horumarinta ee kuwa dhisaya guryaha.
2. Dib-u-adeegsi iyo qiimo jaban: Dhammaan qalabyada nidaamka aluminium ee qaab-dhismeedka dib ayaa loo isticmaali karaa. Nidaamka samaynta aluminium ee aluminiumku wuxuu adeegsadaa xoqitaan lagama maarmaan ah si uu u sameeyo astaamaha aaladda aluminium sida alaabta ceeriin (6061-T6). Qeyb ka mid ah qeexitaannada qaabeynta ayaa la rogi karaa loona isticmaali karaa in ka badan 300 jeer. Qiimaha jaban ee isticmaalka.
3. Dhisme ku habboon iyo waxtarka sare: Nidaamka qaab-dhismeedka aluminiumku waa mid fudud oo ku habboon in la isu geeyo. Waxay u baahan tahay oo kaliya in la kordhiyo guddiga caadiga ah si isku mid ah inta lagu jiro rakibidda. Qaab-dhismeedka aluminiumku wuxuu ku yar yahay culeyska 18-25 kg mitir laba jibbaaran. Nidaamka dhismaha gebi ahaanba waa la soo uruuriyay oo gacanta ayaa lagu raray, mana ku tiirsaneynin qaadista qalabka Farsamada (shaqaaluhu badanaa waxay u baahan yihiin kaliya bambaano ama dubbe yar, taas oo ku habboon oo dhakhso leh). Rakibayaashu waxay rakibi karaan 20-30 mitir murabac ah qofkiiba maalintii (rakibayaasha alwaaxa qaab-dhismeedka aluminium waxay badbaadin karaan 30% marka la barbar dhigo qaab-dhismeedka alwaax, farsamo yaqaanna looma baahna. Waa ku filan tahay in loo qabto tababar fudud shaqaalaha dhismaha 1 saac ka hor inta aan la rakibin) .
4. Xasilooni wanaagsan iyo awood qaadasho sare: Nidaamka aluminium ee qaab-dhismeedka ayaa dhammaantood lagu soo ururiyey qaab-dhismeedka aluminium. Ka dib markii nidaamka la ururiyo, wuxuu sameyn doonaa qaab guud oo leh xasillooni wanaagsan. Awoodda qaadiddu waxay gaari kartaa 60KN halkii mitir laba jibbaaran, mana jiri doonaan shilalka ballaadhinta caaryada. .
5. Baaxad ballaaran oo codsiyo ah: Nidaamka qaab-dhismeedka aluminiumku wuxuu ku habboon yahay dhammaan qaybaha dhismaha, sida darbiyada xamuulka qaada, tiirarka, dogobbada, sagxadaha sagxadda, jaranjarooyinka, balakoonnada, iwm., Oo lagu dhammaystiri karo sibidh hal mar ku shubaya.
6. Saamaynta wanaagsan ee dusha sare ee shubka ka dib demoulding: Ka dib demoulding of aluminium formwork, tayada dusha sare ee la taaban karo waa siman oo nadiif ah, kaas oo buuxin kara shuruudaha dhameystirka iyo la taaban karo cadaalad wajiga aan malaastada, taas oo badbaadin kara kharashka makiinada labaad.
7. Ma jiro qashin dhisme oo goobta yaala, dhisme badbaado leh: Dhammaan qaybaha aluminium-ka ayaa dib loo isticmaali karaa, qashin ma yaallo goobta kadib marka la furo, miridhku ma jiro, khatarta dabka ma jirto, ciddiyaha birta ahna ma leh goobta lagu rakibayo, malahan alwaax chainsaw Dowels dowels iyo qashinka kale ee dhismaha, goobta dhismuhu waa hagaagsan tahay, mana soo saari doonto qashin badan oo qashinka dhismaha ah sida adeegsiga qaabab alwaax ah. Waxay si buuxda u buuxisaa heerarka dhismaha dhismaha cagaaran. Adoo adeegsanaya boodhadh khafiif ah, waxay xaqiijin kartaa in dhisayaasha ay si nabadgelyo ah ugu shaqeyn karaan baararka. 8. Naqshadeynta hal-mar, saxsanaanta sare, iyo kudhaqanka xoogan: Marka loo eego sawirada dhismaha, hal-mar naqshadeynta, daadinta isku dhafka ah, dhismaha ciriiriga ah, khaladaadka yar iyo saxsanaanta sare, si loo hubiyo guud ahaan awooda iyo nolosha adeegga, aad iyo aad ku habboon jaangooyooyinka dhaadheer ee caadiga ah, daaraha dhaadheer ee dhaadheer iyo Dhismayaal fara badan oo isku nooc ah, qaabka aluminium ayaa lagu soo ururin karaa iyada oo la adeegsanayo qeexitaanno kala duwan oo taarikooyin ah sida mashruucu yahay. Marka qaab dhismeedka la isticmaalay dib loogu dhiso dhisme cusub, kaliya 20% taarikada aan caadiga ahayn ayaa loo baahan yahay in la beddelo.
9. Heerka soo-kabashada sare iyo qiimaha haraaga weyn: Qalabka aluminium ee aluminium ayaa dib loo isticmaali karaa markasta. Ka dib markii nidaamka aluminiumka la tirtiro, marka daaweynta qashinka ay leedahay qiimo haraaga ah, dhammaan qalabka aluminiumku waa qalab dib loo cusbooneysiin karo, oo u hoggaansamaya ilaalinta tamarta qaranka, ilaalinta deegaanka, iyo Kaarboon-hoose, xeerarka dhimista qiiqa, iyo waara siyaasadaha warshadaha.
10. Nidaamyo taageeraya oo yar iyo socod fudud: Qaababka dhismaha ee soo jireenka ah, sagxadda sagxadda, barxadda iyo farsamooyinka kale ee qaab-dhismeedka guud ahaan waxay isticmaalaan qaansooyin dabaqa ka buuxa ah, kuwaas oo cunaya shaqada iyo qalabka. Nidaamka taageerada hoose ee aluminium-sameynta qaab-dhismeedka wuxuu qaataa taageerada "hal-biibiile toosan oo madax-bannaan", oo leh celcelis ahaan masaafada 1.2 mitir, looma baahna taageero taageero oo jiif ama xagal leh ah, meel bannaan oo ballaadhan, shaqaale dhisme, maarayn qalab wanaagsan, iyo fudud iyo ka saarida haboon ee hal taageerooyinka. Si fudud loo maareeyo.